၂၀၂၀ NAB ပြပွဲတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေ့ကျင့်မှုနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ၂၀၂၀ NAB ပြပွဲတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေ့ကျင့်မှုနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ
အထူးသဖြင့်ရေဒီယို / ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်တိုးတက်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည့်မည်သည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုမဆို၏ခရီးသည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုစိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်မောင်းနှင်သည် 2020 NAB ပြရန်။ အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် အတူတကွ ဦး ဆောင်၏ကြီးမားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဂေဟစနစ်ကိုစုသိမ်းမည် ရေဒီယို / ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ နှင့်နည်းပညာအမြော်အမြင်ရှိသူများ။ တီထွင်ဖန်တီးမှုများကိုစတင်ခြင်းနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားများသည် Las Vegas တွင် ၅ ရက်ကြာပေါင်းသင်းခြင်း၊ သူတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုပိုမိုရရှိခြင်း၊ ဗဟုသုတများရရှိခြင်း၊ ရှေ့ပြေးလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများရရှိခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်လက်တွဲပြီးထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်အနုပညာကိုတိုးတက်စေသောစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ , ရေဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းအကြောင်းအရာဖန်တီး၏, သိပ္ပံနှင့်စီးပွားရေး။
ဒီလာမယ့်Aprilပြီလ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်နေရာဖြစ်လိမ့်မည် 2020 NAB ပြရန်။ အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ သုံးစွဲမှုနှင့်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသောလူမျိုးစုများမှအထူးပြုသူများသည်အကြောင်းအရာများကိုအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနည်းများဖြင့်အသက်ဝင်စေရန်စုရုံးနိုင်လိမ့်မည်။ က 2020 NAB ပြရန်.
2020 NAB ပြရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ & အစီအစဉ်များ
အမျိုးမျိုးတို့တွင် စပီ, နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများကို 2020 ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် NAB ပြရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှဖန်တီးသူများတက်ရောက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိလိမ့်မည် စာရင်း ဒီခမ်းနားအဖြစ်အပျက်မှာအရပျကိုယူပြီးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 2020 မှာပါဝင်သည် NAB ပြရန် ဖြစ်လိမ့်မည်ကွင်းဆင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတီထွင်ဖန်တီးမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နှင့်အတူ "လက်ကမ်းဆော့ဗ်ဝဲသင်တန်း။ "
နှင့်အတူကွင်းဆင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ", တက်ရောက်သူဖန်တီးမှုများ 2020 NAB ပြရန် တကယ့်လက်တွေ့အခြေအနေတွင်သူတို့၏လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုများကိုလုံလောက်စွာစူးစမ်းလေ့လာနိုင်လိမ့်မည်။ ကွင်းဆင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးသူများသည်ရေဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်နေသောအပူဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းများ၊ နည်းပညာများနှင့်အပလီကေးရှင်းများကိုထုတ်လွှင့်နိုင်စဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများထံမှသင်ခန်းစာယူနိုင်သည်။ ယခုမှတ်ပုံတင်မည် 675+ မှစတင်ပြီးကွင်းဆင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအတွက်17ပြီ ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်၊
အလုပ်ရုံ နှင့် FMC
"ကွင်းဆင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ"နှင့်အတူလက်တွဲထုတ်လုပ်နေကြသည် FMC (အနာဂတ်မီဒီယာ Concepts, Inc) ။ FMC သည်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများနှင့်အိုင်တီပညာရှင်များအတွက်အရည်အသွေး၊ တသမတ်တည်းနှင့်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောလေ့ကျင့်မှုများကိုပေးသည်။ FMC သင်တန်းများ တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီစေရန်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောတီထွင်သူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။
ပရီးမီးယားလိဂ် Pro ကို
ဤသင်တန်းဘာသာရပ်များလည်းနှင့်အတူပါဝင်သည်နေကြသည် ပိုမိုနှစ်သက်လေ့ကျင့်ရေး options များ FMC ကအောက်ပါအတိုင်းကမ်းလှမ်းသည် -
ပညာရေး / အကျိုးအမြတ်မယူသောအကျိုးကျေးဇူးများ
FMC လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသူဖြစ်ပြီးပိုမိုသိရှိလိုပါကစစ်ဆေးပါ www.fmctraining.com/.
ဒါ့အပြင်အတူတူ FMC"လက်ကမ်းဆော့ဗ်ဝဲသင်တန်း"အလယ်အလတ်နှင့်အဆင့်မြင့်တက်ရောက်ဘို့ထူထောင်သည်။ တီထွင်သူများတက်ရောက်ရန်လက်ကမ်းဆော့ဝဲလ်သင်တန်းသည် FMC ၏ကျွမ်းကျင်သူများထံမှစာသင်ခန်းအတွင်းရှိကုန်သွယ်မှု၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်နက်နက်နဲနဲလေ့လာနိုင်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများကိုရယူနိုင်သည်။
“ Hands-On Software Training” အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် 675+ တွင်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို ၂၀၂၀၊ 17ပြီလ ၁၉ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိကျင်းပပါမည် မြောက်ခန်းမအစည်းအဝေးခန်းများ နှင့် တောင်ခန်းမအစည်းအဝေးခန်းများ.
အထက်ဖော်ပြပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အတူ 2020 NAB ပြရန် ကမ္ဘာတလွှားမှတီထွင်သူများကိုစုဆောင်းရန်၊ ပေါင်းစည်းရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ရေဒီယိုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းပုံပြင်ပြောသူများအဖြစ်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောသင်ကြားမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 2020 NAB ပြရန် 18ပြီလ ၁၈ ရက်မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိကျင်းပမည် Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ.
2020 အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များသည် NAB ပြရန်ထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး www.nabshow.com/.
"လက်ကမ်းဆော့ဝဲလ်သင်တန်း။ " 2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2020 NAB ပြရန် 2020 NAB ပြပွဲအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ & အစီအစဉ်များ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ကွင်းဆင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ FMC NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB16 nabshow ရေဒီယို / ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ	2019-12-27
နောက်တစ်ခု: ကော်ပိုရိတ်အသံအင်ဂျင်နီယာ (အလွတ်တန်း)